Malunga nathi - iZhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
IPhaneli yoDonga yePvc
Iphaneli yokuPhela kwePVC
Iphaneli yePVC yeSlatwall
PVC Trim Ukubumbela
IBhodi yePvir Skirting
Iphaneli yeWPC yeWall
Iphaneli yokufaka i-WPC
Isakhelo soMnyango weWPC
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd., Ltd.eyasekwa ngo-2004, yinto umenzi ekhethekileyo PVC udonga kunye isilingi iiphaneli, PVC amagwebu yokubumba, iinkangeleko PVC / WPC kunye PVC / WPC yangaphandle decking, nto leyo iyavumelana ukhuselo lokusingqongileyo. Umzi mveliso wethu ubekwe kufutshane nembonakalo entle yeNtaba yeMogan eWukang, eDeqing, kwiPhondo laseZhejiang. Kukho iikhilomitha ezingama-45 kude neWest Lake eHangzhou kunye neekhilomitha ezili-160 ukusuka kwisixeko esikwisithili saseShanghai. Ke ukuthuthwa kule ndawo yeyona nto ilunge kakhulu.
Thina iinjineli ezingaphezu kwama-30 kunye namagcisa abo ngokukodwa ekuphuhliseni iimveliso ezintsha. Iimveliso zethu zinokwaneliseka ngezicelo zabathengi. Zonke iintlobo zeentlobo, iipateni kunye nemibala esele siyiphuhlisile zikhokelela kwimfashini kwicandelo lokuhombisa laseTshayina. Sineevenkile ezingaphezu kwe-140 kwaye sinee patent ezininzi e-china. Iimveliso zethu zifumaneka kwihlabathi liphela njengeYurophu, Middle East, Asia kunye neMelika.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane beshishini kunye nabathengi abavela kwihlabathi liphela!
Isiqwenga sokuqala sePaneli yePVC enophawu lweHuazhijie sazalwa, esigcwalisa imarike yepaneli engenanto esemgangathweni ophezulu echina.
Deqing Huazhijie Decoration izinto co., LTD. yasekwa.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule zokwakha Co., Ltd. yasekwa. Injongo yokwandisa nokukhuthaza itekhnoloji ye-PVC kunye ne-WPC Foam ngohlobo lweHuaxiajie.
Umasifundisane ongu-2 wafakwa kwimveliso. Umasifundisane wafikelela kuma-30000 eemitha zesikwere ngokupheleleyo.
Ufumene isiqinisekiso se-ISO9001: 2000 esikhutshwe yi-SGS.
Umasifundisane ongu-3 wafakwa kwimveliso. Ummandla weworkshop wafikelela kuma-40000 square metres ngokupheleleyo.
Ufumene isiqinisekiso se-CE.
Iinkokheli zeDeqing County Party Committee kunye noRhulumente weNdawo batyelele iNkampani yeHuaxiajie kwaye bavakalise ukuba bayakukhuthaza kwaye baxhase uphuhliso lweHuaxiajie yethu.
IHuaxiajie yiya kwi-11 yeAsia-Pacific yeQonga lezoQoqosho.
IHuaxiajie ifezekise iTshayina eliPhezulu eliPhezulu eliPhezulu eliPhezulu.
Inkampani yethu yayiyeyemigca yemveliso eqhubele phambili esuka eJamani nase-Itali, amandla apheleleyo ngonyaka angaphezu kwe-5 yezigidi zeemitha zesikwere zodonga kunye neepaneli zesilingi, ngaphezulu kweemveliso ezingama-6,000MT zePV, kunye nezinye iimveliso zePVC ezingama-2,000. Iimveliso zethu zinezibonelelo ezicacileyo kubunzulu obuphezulu, ubungqina bokubola, ukungabi nomlilo, ubungqina obumanzi, ukumelana nefuthe, ukumelana nesandi, ukufakwa ngokulula, kunye nokugcinwa okulula njalo njalo. Ingasetyenziselwa ngaphezulu kweminyaka engama-30 ngaphandle kokuguga okanye ukubuna kwaye inoluhlu olubanzi olusebenzayo kuzo zonke iindidi zeehotele, izakhiwo zeofisi, izibhedlele, izikolo, izityalo zeshishini, izakhiwo zorhwebo, iivenkile zokutyela kunye namakhaya okuhlala anje ngokuhombisa ngaphakathi.
1. Khetha imveliso
2. Sithumele uphando kwi-Intanethi okanye nge-imeyile
3. Sicaphula kwaye silungiselela iisampulu ukuba kukho imfuneko
4. Uqinisekisa iisampulu kwaye uthumele i-odolo yokuThenga
5. Sithumela i-invoyisi yeproforma kunye neendleko zokuhambisa.
6.Iqinisekisile i-PI kwaye wayenza intlawulo,
7. Emva kokufumana isiliphu sebhanki yentlawulo emva koko silungiselela imveliso kunye nokuthumela ngokufanelekileyo.
a. T / T kwangaphambili (ukuGqithisela ngeTelegraphic) koku kulandelayo:
1 /. umthengi omtsha
2 /. Umyalelo omncinci okanye umyalelo wesampula
3 /. ukuthunyelwa komoya
b. Idiphozithi engama-30%, emva koko ibhalansi ye-T / T ngaphambi kokuthunyelwa, kubathengi abathembekileyo
c. I-L / C engenakuguqulwa xa ubona, kubathengi bakudala kunye neeodolo zevolumu.
Ngokwesiqhelo sidinga iintsuku ezili-15 emva kwentlawulo, ukuba imveliso ifuna izixhobo ezivulekileyo ezintsha, mhlawumbi ifuna ixesha elininzi.
Ixesha elichanekileyo lokuhambisa liya kuxhomekeka ngqo kwi-odolo kwaye ukuthengisa kwethu kuya kukuphendula.
Iibhodi eziDibeneyo zoMthengisi wePvc kunye nePaneli yePvc yoPhahla lwangaphakathi kwiMvelaphi yeTV
Ukugquma eludongeni ngePVC kunokuba kuhle kakhulu!
Amanyathelo okhuseleko ekusetyenzisweni kweepaneli zodonga lwangaphandle
Uyifaka njani i-pvc iindonga zokuhombisa
NO 355 Zhiyuan Road, Wukang Town, Deqing County, kwiPhondo Zhejiang, China